Tokony ho ao amin'ity pejy valin'ny fikarohana ity ianao. Martech Zone
Tokony ho ao amin'ity pejy valin'ny milina fikarohana ity ianao
Talata, Martsa 3, 2009 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Anio hariva dia nahafaly ahy ny niresaka tamina hetsika voalohany natolotray ny Techmakers, ny sampana voalohany an'ny Rainmakers manokana. Nipetraka tao Indianapolis nandritra ny 7 taona ary nanao tsikelikely ny sehatry ny teknolojia, nahafinaritra ny nahita an'io endrika io.
Nanao skit aho androany alina ary nieritreritra fa mandeha tsara izany. Niara-nipetraka tamiko i Doug Theis ny zoma rehefa avy nizara ilay hevitra aho ary nivarotra izahay ny script miaraka. Ny skit dia momba ny orinasa sandoka mitady loharanon-karena IT hanampiana amin'ny famahana ny olan'ny Exchange. Nody izahay fa nitady fanampiana ilay orinasa - voalohany tao amin'ny Facebook, avy eo LinkedIn, avy eo Twitter ary farany tamin'ny tranokalan'ny orinasa.
Ny fitsidihana tsirairay amin'ny iray amin'ireo mpampita vaovao ireo dia iharan'ny loza. Na ny tranokalan'ny orinasa, referral aza, dia feno marketing miteny - tsy misy atiny manarona ny fanohanana ny consultation IT Exchange na ny fomba mahomby hifandraisana amin'ny orinasa. Ny valinteny tsirairay dia tena tafahoatra tamin'ny fanampian'ny Lorraine Ball ary Doug Theis an'ny Ivotoerana data.
Ny famaranana ny skit dia ny firesako fotsiny ny valiny mifandraika izay omen'i Google, ny tanjon'ny mpitsidika, ary koa ny isan-jaton'ny fampiasana. Ny olona mitsidika Facebook dia tsy mikasa ny hividy, fa misy olona mitady vokatra na serivisy manana izany fikasana izany. 90% ny olona izao no mampiditra ny fikarohana ao anatin'ny hetsika Internet isan'andro - Facebook, Twitter, LinkedIn, sns. Mitambatra dia latsaky ny 4%.
Ny zava-misy dia ireo orinasa maniry ny hahazo fitarihana fidirana anaty fidirana dia tokony hampiasa karazana tetika fitadiavana Search Engine Marketing (na maro). Mitoraka bilaogy ho an'ny SEO dia fitaovana mahery vaika matanjaka hahazoana fahazoana mitarika.
Ireo bilaogy izay nohatsaraina araka ny tokony ho izy ny motera fikarohana. Fandraisana an-tanana tsy misy fetra miaraka amin'ny atiny lehibe mitohy - raha mbola manoratra atiny lehibe ianao dia ho hita.
Tranonkala izay novaina araka ny tokony ho izy ny motera fikarohana. Voafetra amin'ny haben'ny tranokala sy ny teny fanalahidy namboarina, matetika ny tranonkala SEO dia fotoana iray very.
Ireo tranokala misy paikadin'ny pejy fitobiana namboarina. Paikady tena mahomby io fa lafo amin'ny fanao fampandrosoana sy SEO.
Pay-isan-Click. Izy io dia mandaitra ihany koa, saingy voafetra amin'ny teny lakile marina ihany no andoavanao sy ny 5% ka hatramin'ny 15% ny tsindry eo amin'ny pejy valin'ny Search Engine (SERP).
Farany, mino aho fa tetika lehibe ny fanaovana bilaogy raha ny fahaizan'ny orinasa mamokatra atiny. Ary koa, ny bilaogy dia manana tombony fanampiny amin'ny RSS, mamela anao hamoaka amin'ireo haitao hafa ireo - Facebook, LinkedIn, Twitter (miaraka Twitterfeed), ary na ny fanangonana ao anaty tranokala aza.
Karohy amin'i Google ny vokatrao na serivisinao (sy ny toerana misy anao raha azo ampiharina). Miseho amin'ireo valiny ireo ve ianao? Ianao dia tokony! Tokony ho ao amin'ity pejy valin'ny motera fikarohana ity ianao.
Tags: aggregationfitorahana bilaogymitoraka bilaogy ho an'i seobilaogy orinasapejy pejymandoa isaky ny kitihomahantra seony valin'ny fikarohanaSEOtwitterfeed
Zahao amin'ny Google Search Console ny paikadin'ny votoatinao
Mar 4, 2009 amin'ny 9: 30 AM
Misaotra nampiditra ahy tamin'ity tantara an-tsary mahafinaritra ity izay maneho hevitra manan-danja. Raha tsy mahita anao ireo mety ho mpanjifanao (mety ho mpividy) rehefa vonona hividy izy ireo, dia tsy manana vintana amin'ny orinasany ianao.
Lalao Tnomeralc Design
Mar 4, 2009 ao amin'ny 8: PM PM
Tiako ity lahatsoratra ity, indrindra ny rohy farany! Amin'ireo pejy an-tapitrisany ho an'io fehezan-teny io, ny laharanao 1. Mahagaga.!